Plywood na-enweghị gluu?
Plywood bu ihe eji eme otutu ihe eji eme ihe site na akuku osisi ma obu osisi di nkpa nke a na-acho site na osisi ma jikọta ya site na nrapado, ma obu otu n'ime ihe ndi ozo maka oche. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime osisi osisi ndị ọdịnala bụ ndị na-emepụta sịntetik resin a ...
Ihe dị iche na plywood na blockboard
Mbadamba Blockboard nwere ihe eji eme ihe na elu nke ogwe osisi siri ike. Mbadamba osisi na-eme ka osisi si na lath, na-ejikwa otu ụdị ma ọ bụ ụdị ihe ahụ. Blockboard nke isi osisi mmiri ọdịnaya akara nzọ ...
Mmalite nke Sulong Wood
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Pizhou, na-adabere na akụ poplar bara ụba nke mpaghara na mpaghara ndị gbara ya gburugburu, emeela ka otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nhazi, ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ na-agba nkesa na-agbakọba isi obodo, enweghị echiche azụmaahịa. Pizhou na-achịkwa ...